ထန်းစေ့မှုတ်ငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ထန်းစေ့မှုတ်ငှက် (ရေဝမ်းဘဲငှက်) ကို သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎) အလိုအားဖြင့် ပေါ့ဒီစက်ရူဖီ ကောလစ်ဟု ခေါ်သည်။ မျိုးရင်းမှာ ပေါ့ဒီစီပီတီဒီး ဖြစ်သည်။ ရေဝမ်းဘဲကို တစီးမှုတ် (ထစိမှုတ်=ထန်းစေ့မှုတ်) ဟုလည်း ခေါ်သေး၏။ အလျား ကိုးလက်မရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရေ၌ကျက်စားသောငှက်များတွင် အငယ်ဆုံးငှက်ဟု ဆိုသည်။ ရန်သူအစအနကို မြင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ရေထဲသို့ ငုပ်လျှိုး၍ သွားတတ်သည်။ ဦးခေါင်းအရောင်မှာ ညိုသည်။ သို့သော် သားပေါက်ချိန်၌ မျက်လုံးရှေ့တွင် အဝါကွက်ပေါ်လာတတ်သည်။ ကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ ဖြူ၍ ပိုးသား အသွေးရှိသည်။ နှုတ်သီးမှာ တို၍ ချွန်သည်။ အမြီးလုံးဝမရှိပေ။ အထီးနှင့်အမ ပုံသဏ္ဌာန်ချင်း တူသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ဦးခေါင်းထိပ်နှင့် လည်ကုပ်မှာ မည်းနက်၍ မေးမှာ ဖြူ၏။ လည်ပင်းတွင် နီညိုရောင် ရှိသည်။
ရေဝမ်းဘဲသည် အလွန်တရာ ရေကူးကျင်လျင်သည်။ ရေငုပ်သည့်အခါ ရေမျက်နှာပြင်၌ လှိုင်းမထအောင် ငုပ်တတ်သည်။ ရေနှင့်ကင်းကွာ၍ မနေနိုင်ဘဲ၊ အမြဲတမ်းလိုပင် ရေကူး၍ နေသည်။ ပျံသန်းရာ၌ အထူးလျင်မြန်၍ ခရီးရှည် ပျံသန်းနိုင်သည်။ ရေဝမ်းဘဲ၏ အစာမှာ ရေထဲရှိ ပိုးမွှားများ၊ ဖားများ၊ ခရုပက်ကျိများ ဖြစ်သည်။ အသံမှာ ချုပ်၍ ရယ်မောသံနှင့် တူသည်။ ထိုအသံကို ခပ်လှမ်းလှမ်းမှပင် ကြားနိုင်သည်။ လန့်ဖျပ် သောအခါ တီ.တီဟု အော်တတ်သည်။
ရေဝမ်းဘဲများကို ရေအိုင်နှင့် ရေကန်များတွင် များသောအားဖြင့် တွေ့ရသည်။ မိုးတွင်းအခါတွင် သားပေါက်လေ့ ရှိသည်။ အသိုက်များသည် ရေပေါ်၌ မျော၍နေတတ်ကြသည်။ အသိုက်မှ မခွာမီ ဥများကို ပေါင်းပင်များနှင့် ဖုံးအုပ်ထားတတ်သည်။ တစ်မြုံလျှင် ဥပေါင်း သုံးလုံးမှ ခုနစ်လုံးအထိ ရှိသည်။ ဥအရောင်သည် အစတွင် ဖြူနေသော်လည်း တဖြည်းဖြည်း ညိုမည်းသွားသည်။ ငှက်ကလေးများသည် ဥမှပေါက်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ရေကူးတတ်ကြသည်။ ဥဝပ်ခြင်းနှင့် သားငယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ကို အဖိုနှင့်အမ နှစ်ဦးစလုံးက ပြုလုပ်ကြသည်။ ရေဝမ်းဘဲကို အာရှတိုက်၊ ဥရောပတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်နှင့် ဩစတြေးလီးယားတိုက်များတွင် အနှံ့အပြား တွေ့ကြရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယင်းတို့ကို ရာသီဥတု သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ဒေသများတွင် တွေ့ကြရသည်။
T. r. capensis - breeding plumage- just coming out of water in Hyderabad, India.‎
T. r. capensis - breeding plumage in Uppalapadu, Andhra Pradesh, India.
T. r. capensis - Non-breeding plumage in Uppalapadu]], Andhra Pradesh, India.
T. r. capensis-Breeding plumage in Secunderabad, India.
T. r. capensis withajuvenile in Krishna Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh, India.
T. r. capensisjuveniles in Krishna Wildlife Sanctuary, Andhra Pradesh, India.
↑ BirdLife International (2017). "Tachybaptus ruficollis". IUCN Red List of Threatened Species 2017. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2017-1.RLTS.T22696545A111716447.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထန်းစေ့မှုတ်ငှက်&oldid=709343" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။